Qubeen qabeenya sabaawaa Oromo fi boona saaniiti. Addatt dhuunfaa murna kamiiyyuu utuu hin tahin kan saba Oromooti. Las gahuuf lubbuu hedduutu itt baafame, nama hedduutu irratt qooda fudhate. Kanaaf Oromoo jiruu fi jireenya adda addaa qaban, mooraa walabaa fi hirkataa keessa jiran hundaaf namooti biraa Oromoott qubee saa akka itt dhimma bahatu himuuf eenyuu hayyama akka hin qabne dura dhaabbachuu ejjennoo akka fudhatan waamicha haa goonu. Yoo Oromoo dha ofiin jettan Qubeen eenymmaa keessan kan gosoota Barintuu fi Booranaan walitt isin hidhu. Sun meeshaa afaan keessanii taasisaa tokkicha badii irraa isin olche; yeroo lafti keessan samamu, aadaa fi dudhaan keessan akka hin shakalamne dhowwame, bulchi keessan dimshaashatt halagaan dhuunfatamee fi seenaan keessan haqame, afaan waloon qabdan qofatu walitt isin hidhe. Lubbuu jaalbiyyoota keenyaa biyya abbaa ofii irraa hamaa ittisuu fi eenymmaa fi ulfina keenyaaf wareegamanii booree nurra kaahanii darbanii yoomu irraanfachu hin qabnu. Sana waan yaadannuuf qabsoo hadhaawaatt bobbaane biyyi keeny Oromiyaan maal akka fakkaatu, eeyummaa keenya hundi akka baru fi daa’imman keenya afaa ofiin akka barattu mirkaneeffannee ture. Haa tahu malee bakka akeekkanne hin geenye. Biyya keenya guutummaatt hin deebifanne, seelkoo seetu nu harka jirra. Halagaan eenyummaa ofii nurratt fe'uuf karaa halle afaan kaa’aa fi uleen nu tuttuqaa jira.